i-Sri Lanka iphula ukunqoba kwama-Proteas
i-Sri Lanka igcine ikuqedile ukuhlulwa kwayo kuma-One-Day Internationals idlala nama-Standard Bank Proteas ngesikhathi benqoba umdlalo wesine ophazanyiswe imvula kwi-series yemidlalo emihlanu ngama-runs amathathu nge-D/L method e-Pallekele ngoLwesithathu ebusuku.
Idlale kangcono i-Sri Lanka kunezinye izikhathi kwi-series. Bagcine beyitholile i-partnership yokuvula umdlalo kushaya u-Niroshan Dickwella no-Upul Tharanga, emuva kokuhlulwa kwi-toss, yama-runs angu-61 kuma-overs angu-11.3 futhi babeka isikhonkwana somphumela u-306/7 kuma-overs abo angu-39 okuqedwe ngendlela encomekayo u-Thisara Perera no-Dasun Shanaka nge-partnership yabo yama-runs angu-109 nge-wicket yesikhombisa kuma-overs adlulile ku-11.
Umdlalo uncishiswe kaningi ngenxa yezulu, okokuqala kwaba ama-overs angu-45, ashintsela ku-43 futhi agcina ku-39, ama-Proteas abekelwa umphumela ka-308.
Okunye okube ukhiye ekunqobeni kwe-Sri Lanka kube ukuvimba kangcono okugqanyiswe i-run out ka-Shanaka ekhipha u-JP Duminy kanye nokunqaka okuncomekayo kwi-short midwicket u-Dhananjaya de Silva ukukhipha u-Wiaan Mulder.
Aqale kahle ama-Proteas njengoba ukapteni omusha u-Quinton de Kock no-Hashim Amla behlise ngama-runs angu-21 kuma-overs okuqala amabili ngaphambi kokuphazanyiswa imvula okushintshe umphumela akade bewujaha waba u-191 kuma-overs angu-21. Empeleni, babuyele enkundleni kusele imizuzu embili ukuthi umiswe umdlalo.
Bekungathi ama-Proteas azokwazi ukujaha umphumela njengoba i-run rate yabo ibifika kwizinombolo ezimbili kuhafu wokuqala womjaho kodwa balahlekelwa ama-wicket ngenjwayelo ukugcina iqembu lasekhaya kumqhudelwano.
Baphose kahle ngasekupheleni kwe-innings u-Thisara Perera no-Suranga Lakmal okunqobise iqembu lasekhaya.
u-Shanaka, obengakayidlali i-ODI kwiqembu le-Sri Lanka eminyakeni embili, ube i-Man of the Match ngomsebenzi wakhe.
Ama-Proteas azoya kumdlalo wokugcina engaphambili kwi-series ngo-3-1,
omunye umdlalo we-Day/Night, e-Colombo ngeSonto.
u-Du Plessis uzophuthelwa imidlalo esele kwi-tour yase-Sri Lanka u-Phehlukwayo uyahluma ngomthwalo wakwi-death Ama-seamers abeka ama-Proteas ngaphambili ngo-2-0 kwi-series Ama-Proteas abheke ukuqhubeza umdlandla wokunqoba u-Shamsi uncoma isimo sasekhaya kuhlulwa i-Sri Lanka u-Rabada no-Shamsi bahlela ukunqoba okulula kwama-Proteas kwi-ODI yokuqala i-ODI series ithuba lokufunda – u-Du Plessis Ama-Proteas ashintshela kuma-ODI u-De Bruyn ushiya uphawu ngekhulu lakhe lokuqala Ukulinganisa i-series kufana nokuyinqoba - u-Du Plessis Akukho ukuthuka kuma-Proteas